Faayilii - Taankii lola irratti rukkutame, Humaraa, Adoolessa 1, 2021
Mootummaan Bulchiinsa Naanoo Affaar haleellaa hidhatttooni Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay raawwataniin aanaalee 3 keessaa namoonii 50,000 qe’ee isaanii irraa buqa’uu beekisiseera.
Dubbi himaan RIB Itiyoophiyaa Koloneel Geetnet Adaanee dhimma kana irratii yaadaa Tajaajila oduu Itiyoophiyaaf kennaniin umnii Hiwahaat Affaariin seene bakka Aleelee Suluulaa jedhamutii manca’uu isaa ibsaniiru.
Akka Dubbi himichii jedhanitti lola kana irrati hidhatoonii Hiwahaat 300 ajjefamanii reenfii isaanii fe’amee gara Tigiraayiti ergameeraa. Akka odeefannoon mootummaa jedhutii wareen ajjefama ijoolewwanii fi dubaraa hiwahaat dirqisiisee waraanaa irratii bobbaaseedha.
Umnii garee Hiwahaat gamaa miidiyaa isaatiin akka ibseti, lola affaar keessatii taasifamee kan irrati hinjifannoo gonfachuu isaa ibseera. Hogantoonii dhabiichaa yeroo amma maqalee keessa jiran ijoollewaan waraanaaf fayyadamuu isaanii haalaniiru.